GV Face Avy Any Gaza: Miaina sy Mitoraka Bilaogy Eo Ambanin’ny Fibodoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2015 3:33 GMT
Hatramin'ny nisian'ireo fanafihana tsatokantsy ny 1 Oktobra, lasa zavatra iainana andavanandro any amin'ny faritra Palestiniana voabodo sy Israely ireo fifampitifirana sy ireo hetsi-panoherana. Farafahakeliny Palestiniana 57 sy Israeliana valo no maty hatramin'ny fanombohan'ny volana.
Nandritra ireny fotoana mahamay ireny, toy ny ahoana ny fiainan'ireo 1,8 tapitrisa mponina ao Gaza ? Mbola tohina, noho ny vokatry ny fanafihana Israeliana nandritra ny 50 andro ilay 40 kilometatra mitomandàvana ny taona 2014, izay namono olona miisa 2.100 ary nanimba ny 40% n'ilay faritra ho korontam-bato.
Amin'ity indray mitoraka ity, niresaka tamin'i Omar Ghraieb izahay, mpitoraka bilaogy malaza sy mpanao gazety mipetraka any Gaza. Miresaka ny fiainana ao amin'ilay faritra voabodo hatry ny taona 2007 i Omar.
Ireto ny ampahany sasantsasany avy tamin'ny resadresakay:
Izaho no nanomboka nanao ny bilaogy amin'ny teny Anglisy voalohany tao Gaza ary nanapaka hevitra ho izaho. Raha te-hilaza ny marina hatrany ianao, tokony mizara ny zava-miseho araka ny tena izy. Tonga sy lasa ny ady. Tafavoaka velona izahay. Ary nanapaka hevitra ny tsy hizara fotsiny ireo vaovao aho, hoe olona miisa 40 no maty. Olona 100 no maty. Nanapaka hevitra ny hizara ireo tantara aho. ireo tantarako manokana avy amin'ny alalan'ireo masoko ihany koa. Nizara torohevitra aho, ny tokony atao, ny tsy tokony atao, ahoana ny hijanonana amin'ny toerana ho azo antoka. […]
Mipetraka ao Gaza aho. Inona moa ny fandriampahalemana? Inona ny tahotra? Tsy zavatra nosafidiako velively izany. Zavatra natsipy taty amiko izany ary tsy maintsy miaina araka izany aho. Noho izany nanapaka hevitra aho hitazona azy io amin'ny fahamarinany. Ireo fotoana mahafinaritra, ireo fotoana mampalahelo, torohevitra, ny zavatra rehetra.
Mikasika ny tatitri Omar nandritra ny fanafihan'ny Gaza ny taona 2014, nanazava izy:
Mieritreritra aho hoe tsy natory mihitsy nandritra ny telo herinandro voalohany. Tena niakatra be ny maripanan'ny fientanentanako. Tiako ho hita daholo ny zavatra rehetra. Tiako hamarinina tsara hoe tsy misy maninona daholo ireo fianakaviako. Nohamariniko tsara hoe tena arako tsara ireo vaovao, nitatitra ireo. Ady tsy mitsahatra aminao lalandava io ho tafapetraka aminà toerana azo antoka, ho salama lalandava, taitra tsara, mitandrina tsara, mitazona ny zavatra rehetra ho tsara fahana, manana drafitra sahala amin'ny dimanjato isa raha toa ka misy ny fahatapahan'ny herinaratra, ho an'ny Aterineto. Nahazo mpihary herinaratra aho, nanomana vatoaratra telo aho ho an'ilay “router”, ny findaiko, ny solosaina entin-tanana. Tena ady tsy misy fitsaharany tokoa io, tsy maintsy mandalo amin'izany ianao isan'andro mba hahazoana Aterineto fotsiny. Milaza amin'ny rehetra ianao hoe salama tsara. Mitatitra vaovao ianao. Mampiseho ny zavatra rehetra mitranga ianao. Mihazakazaka matetika aho fa efa ho faty ny findaiko, tsy maintsy mifindra eny amin'ny solosaina entin-tànana indray aho. Na dia fanamby aza ny fiainana isan'andro taty. Noho izany, tsy miantsy mandalo azy io amin'ny alalan'ny ady. Tsy fantatro hoe ahoana no nanaovako izany. Tsy nanary ny aiko aho. Tsy very ny tranoko, ny fianakaviako. Fa tsy fantatro hoe ahoana no nataoko tamin'izany.
Milatsaka ireo baomba. Mihozongozona ny trano. Dia inona no ataoko? Teo amin'ny kihon-trano aho mitazona ny findaiko, mitatitra vaovao mazava ho azy, tao anatin'ny maizina, mampahatsiahy ny tenako hoe eo am-panoratana ny zavatra tiako ao Gaza aho. Iza ireo olona aty manainga ny fanahiko? Mba hitazonana ny fanantenana fotsiny. Ary indraindray tonga amin'ny fotoana hoe mitovy amin'ny fanantenana sy fiainana ny findaiko. Hoe raha misy fanafihana an-habakabaka mafy be, mihontsona ny trano ary mifindra ianao. Hisidina any amin'ny lalantsara aho. Mitazona mafy ny findaiko, mafy noho ny fiainana, satria amiko, amin'io fotoana io, mitovy amin'ny fiainana sy fanantenana ny findaiko. Satria manoratra ny fanantenan'ny tenako aho. Nifikitra tamin'ny fiainana aho tamin'ny fampahatsiarovako ny tenako hoe ho tafavoaka velona soa aman-tsara amin'io. Tafavoaka velona tamin'io i Gaza. Tafavoaka tamin'io izahay. Tsara tarehy i Gaza.
Noresahan’ i Omar ny momba ny tambajotra manerantany anà mpikatroka mafana fo, nanampy azy sy ireo Palestiniana hafa hanohy hitatitra vaovao nandritra ny fanafihana.
Tohina tanteraka aho, gaga ary nafàna ny fo hoe nitambatra ireo mpikatroka mafàna fo manerana ny tany tontolo izay manohana ny Palestiniana, nitàna ny kaontinay ho azo antoka. Nitazona anay hijanona amin'ny Aterineto izy ireo. Niady nampihemotra ireo jiolahin'ny Aterineto izy ireo, nandefa rohy ho anay izy ireo. Nilaza taminay ny zavatra tokony atao sy ny fomba hijanonana ao amin'ny Aterineto na tsy mandeha intsony aza ny Aterineto. Tena fianakaviananà mpikatroka mafana fo teo an-toerana, mpikatroka mafana fo iraisam-pirenena ary olon-tsotra mpanao gazety iny.
Nanipika izy fa tsy tiany hoe momba ny ady fotsiny ny tatitra ataony, satria tsy izany no ikatsahan'i Gaza sy ireo vahoakan'i Gaza ny rariny:
Misy zavatra izay tsy asehoan'ny ankamaroan'ireo media anao. Ary io ny lafiny tsara. Olona ny vahoaka aty. Manana fianakaviana izahay. Mivoaka izahay. Mihomehy izahay. Tia ny fiainana izahay. Tia ny fanantenana izahay. Amin'ny lohataona, eny amoron-dranomasina ny ankamaroan'ireo vahoakan'i Gaza, tsy afaka hitanao ny moron-dranomasina noho ny fisian'ireo olona maro be eny. Manana filentehan'ny masoandro mahavariana izahay. Tena mahay mandray olona ny olona aty. Manana toetrandro mahafinaritra sy olona mahafinaritra izahay. Ka nahoana aho no tsy tokony hanazava izany ? Hoe eny, toerana tsara tokoa i Gaza, na eo aza ny zavatra hitanareo sy renareo, ary na eo aza ny zavatra hitako sy reko.